Etu ị ga-esi nweta akwụkwọ ntụpọ dị mfe ma dị mfe | Crafts Na
Irene Gil | | Crafts, Ọrụ nka, Crafts maka ụmụaka
Maka oge opupu ihe ubi a Okpueze nke okooko osisi na mgbidi na ibo ụzọ. Na nke a nkuzi ị nwere ike ime otu n'ime akwụkwọ oke na agba ịchọrọ, mana ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ọ dịkwa mma ime ụmụaka.
Ime ya Okpueze nke okooko osisi ị ga-achọ obere ihe:
Ga-ahụ na ọ bụ nka dị mfe ma dị mfe ji achọ y obi ụtọ maka oge opupu ihe ubi na udu mmiri. Na agba ha na-echetara ntakịrị ihe okpueze y agba aja aja ọ bụ ezie na ha abụghị okooko osisi nke ụdị a. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​nwere ike ime ya na agba kachasị amasị gị. Lelee ihe ndị a video-nkuzi kedu ebe m ga akowa ihe nzọụkwụ site na nzọụkwụ ya mere ị nwere ike ịmepụta ya onwe gị.
You hụla etu ọ dị mfe? N'agbanyeghị nke ahụ anyị ga-echeta nzọụkwụ ịgbaso ka ị ghara ichefu nke ọ bụla n'ime ha ma ị nwere ike ịme ya Okpueze nke okooko osisi nsogbu adịghị.
Chịkọta mpempe akwụkwọ 5.
Bee ha gburugburu.
Tinye ha na staple abụọ dị ka obe.
Mee mkpụmkpụ nke etiti-ụzọ gburugburu ọnụ.
Kewapụ akwa ọ bụla site na ịkwado ya n'etiti ifuru.
Mepụta gburugburu na waya.
Ghichaa okooko osisi gburugburu waya ahụ site na enyemaka nke ịgba silicone.
Na n'ụzọ dị otú a mfe ị ga-enweta gị ifuru okpueze okokụre.
Typedị okpueze a dị mma na ha abụọ ọnụ ụzọ dị ka paredes. enye nnọọ obi ụtọ ji achọ aka ọ bụla ohere.
Ọ bụrụ na ị ga-eme ya na ụmụaka, jiri umuaka umuaka nyere ha aka ka ha di isi, ebe uzo a nwere ike ibu obere. Ọ bụrụ na ịchọghị iji silicone na-ekpo ọkụ ị nwekwara ike iji ya mee ya oyi silicone y White gluu, ma ebe ọ bụ na nrapado ndị a abụghị ozugbo, ị kwesịrị ịhapụ okpueze ifuru nke ọma na-akwado ya ka okooko osisi ahụ ghara ịda mgbe ọ dị ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Etu esi eme ngwa ngwa na mpempe akwukwo nkpuru osisi
Ista bunny ọgụgụ nzọụkwụ site ntụpụ ụkwụ